Abaphathi okuyisisekelo bokumaketha kwe-database ukuthi ungakwazi ukuhlaziya futhi uthole amaphuzu eqoqo lamathemba ngokuya ngokufana kwawo namakhasimende akho wangempela. Akusona isisekelo esisha; besisebenzisa idatha emashumini ambalwa eminyaka manje ukwenza lokhu. Noma kunjalo, le nqubo yayinzima. Sisebenzise amathuluzi wokukhipha, wokuguqula nokulayisha (ETL) ukudonsa idatha kusuka emithonjeni eminingi ukwakha insiza eyodwa. Lokho kungathatha amasonto ukukufeza, futhi imibuzo eqhubekayo ingathatha izinyanga ukuthuthukisa nokuhlola.
Dlulela phambili manje futhi amathuluzi aya ngokuya enemba ngokwengeziwe, ama-algorithm ayinkimbinkimbi ngokwengeziwe, futhi imiphumela iyazenzakalela futhi iyathuthuka. Ngombiko ka-Everstring, Umbiko Wenhlolovo Yokumaketha Okubikezelwayo ka-2015, ukuhlangana kwezinto ezintathu kuholele ekukhuleni okusheshisayo kokumaketha okubikezelayo:
Inani Elikhulu Ledatha - umlando wokuthenga, ukuziphatha, nedatha yokubalwa kwabantu manje isiyatholakala kunqwaba yemithombo.
Ubuningi Bokufinyelela - Ukufinyelela kwedatha yokusakaza cishe yonke imithombo elandwayo nexhunyiwe inikezela ngomsebenzi ocebile, wesikhathi sangempela.
Ukulula Kwefu - amandla amakhulu wekhompiyutha ngefu, ubuchwepheshe obusha be-database yedatha obunama-algorithms acebile futhi ayinkimbinkimbi asiza ukushayela emisha emkhakheni wokumaketha oqagelayo.
Kuyini ukumaketha okubikezelayo
Ukumaketha okubikezelayo kuwumkhuba wokukhipha imininingwane kumadathasethi wamakhasimende akhona ukucacisa iphethini nokubikezela imiphumela nezitayela ezizayo. Umbiko Wenhlolovo Yokumaketha Okubikezelwayo ka-2015
Idatha ihlanganiswe kumakhasimende amanje, ama-algorithms alungiswe ngesikhathi sangempela, kanye nemikhombandlela ikorelwa amandla okushayela imiphumela yebhizinisi. Futhi, imithombo yokukhangisa neyethameli ingalinganiswa ukuthuthukisa imikhankaso enezimpendulo zokubikezela.
Ukwamukelwa kokumaketha okulindelekile kusencane, noma kunjalo. Cishe ama-25% wabaphenduli bathi bane-CRM eyisisekelo, futhi ngaphezulu nje kuka-50% babike ukuthi batshale imali ekukhangiseni okuzenzakalelayo noma bafuna isixazululo. Bangu-10% kuphela abaphendulile abathi bahlanganisa i-CRM ne-automation nobunye ubuchwepheshe ukuqhuba imiphumela yebhizinisi. Kusekude phambili okumele sihambe!
Lokho kusho, umbono unethemba. Ama-68% abaphendulile asho ukuthi ayakholwa ukumaketha okubikezelayo kuzoba yingxenye ebalulekile yesitaki sokumaketha Qhubekela phambili. Iningi lalaba bantu abaphendulile lisebenze ezinkampanini zebhizinisi namaqembu wokumaketha angaphezu kuka-50. 82% wezinkampani ezizibophezele ekutholeni amagoli okuqagela zicwaninga ukumaketha okubikezelayo.
Akuyona isayensi ephelele, kepha inamandla okwandisa ngokuphawulekayo ukwethenjwa, ukuzibandakanya nokuguqulwa phakathi kwabathengi nabathengisi esikhathini esizayo esiseduze. Futhi lokho kuya ngemiphumela yomkhankaso wokumaketha kanye nokuzibandakanya neqembu lakho lokuthengisa. Izinto ezijabulisayo. UMat Heinz, uMongameli, uHeinz Marketing.
Ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuhlangana phakathi kokumaketha okubikezelayo nezinto ezifana nosayizi weqembu lokumaketha, usayizi wenkampani, nokuvuthwa kokumaketha:
Landa uMbiko Wocwaningo Lokumaketha Lokuqagela luka-2015
Landa umbiko ukuze uthole izimpendulo zale mibuzo elandelayo nokuningi:
Ngabe umakethe ovamile nobuchwepheshe uvuthwe kangakanani?
Bangaki abathengisi abasebenzisa ukumaketha okubikezelayo namuhla?
Ngabe abathengisi bakusebenzisa kanjani ukumaketha okubikezelayo njengamanje?
Ngabe usayizi wenkampani, ubukhulu beqembu, namasu wokumaketha kuthinta kanjani ukuvuthwa kokumaketha nokusetshenziswa kokumaketha okubikezelayo?
I-EverString ikuvumela ukuthi wakhe ipayipi futhi wandise amazinga wokuguqulwa kwamakhasimende ngokuqagela okususelwa ku-akhawunti kuphela, okugcwele analytics Isixazululo sokuthengisa nokumaketha. Ipulatifomu Yesinqumo se-EverString iyi-SaaS elula ukwenza okuhlinzekwayo ehlangana ngaphandle komthungo nezicelo ezikhona zokumaketha nezeCRM ukubona izici zama-akhawunti wakho afanele.
Tags: 2015idatha enkulunjaloukumaketha kwe-heinzinfographicmatt heinzukumaketha okubikezelayoukuqagela amagoliisimo sokumaketha okubikezelayo
UKarel Koes Hiranjgarbh Missier Paragh
I-Oct 26, i-2015 ku-7: i-16 PM
I-athikili enhle. Izincomo zami. Ozithobayo, uKarel Paragh